5 Tilmaamood oo ay tahay inaad ogaato kahor intaadan dooran soy sauce-Soy Sauce-NANTONG CHITSURU FOODS CO., LTD.
Kalluun la dubay
Maraq xilli xilli ah
Ku Saabsan Shirkadayada
Ku Saabsan Baddaha
Ku saabsan Soy Sauce
Ku saabsan Ginger
Ku saabsan Teriyaki Sauce
Ku saabsan Vinegar
Ku saabsan Wasabi
5 Tilmaamood waa inaad ogaataa kahor intaadan dooran sooska soyka
Waqtiga: 2021-04-13 Hits: 43
We waxaa laga yaabaa inuu isticmaalo sooska soyka maalin kasta, laakiin qaarkeen runti waxba kama yaqaanaan xulashada suugada soy, maanta aan kuu soo bandhigno talooyin adiga kugu saabsan.
First, dabcan wax soo saarka iyo taariikhda uu dhacayo .
Sfarxad,Fiiri tusmada tayada iyo midabka; maraqa soyka wanaagsan wuxuu abuuri doonaa xumbo badan markii la ruxo, mana sahlana in la kala firdho. Adiguba waad urin kartaa. Maraqa soy wanaagsan ayaa leh xoog badan ur .
Tsaddexaad,Eeg calaamadda. Laga soo bilaabo qayb oo ka mid ah maraqa soy, waad garan kartaa midka suugada soyka ah ama maraqa soyka ah ee isku jira.
Fkuteenkeenii, dhigay aad karinta ujeedada si cad. Maraqa soyka waa in loo calaamadeeyaa u adeegida ama karinta. Tilmaamayaasha nadaafadeed ee labaduba way kala duwan yihiin, tusmada gumeysiguna sidoo kale way ka duwan tahay. Si toos ah ayaa loo cuni karaa iyadoo la raacayo, waxayna leedahay tilmaamayaal nadaafadeed oo wanaagsan. Haddii ay tahay wax karinta, waa in aan loo isticmaalin suxuunta qabow.
Fifth,Eeg midabka. Midabka suugada soyka caadiga ah waa inuu noqdaa bunni guduudan, midabka tayada wanaagsanna waxyar ayuu mugdi ahaan doonaa, laakiin haddii midabka maraqa soyka uu aad u madow yahay, waxay ka dhigan tahay karamell suufka is lagu soo daray
Xiga: Taariikhda Soosaarka Soy Sauce
Buuxi foomka oo noo soo dir fariintaada. Waxaad heli doontaa jawaab sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah macluumaadka aad codsatay.
Ku dar: Shiyizong, Lusi Town, Qidong, Jiangsu, Shiinaha, 226241
Noqo kan ugu horreeya ee wax ka ogaada alaabada ugu dambaysa.
Xuquuqda daabacaadda © NANTONG CHITSURU FOODS CO., LTD. Farsamo by MEEALL